Andrana tefiendrika ato amin’ny Global Voices, sy ny karazana “Skinny Post” (Lahatsoratra Manify) · Global Voices teny Malagasy
Lahatsoratra vaovao GV tsy asiana tsanganana, ahoana no hevitrao?
Voadika ny 06 Janoary 2021 3:05 GMT
Eh, ianao io, fanavaozana kely ity lahatsoratra ity, momba ny fanovàna tefiendrika mitranga ato amin'ny GV sy ny dingana ampiasaintsika hanandramana ireo hevitra vaovao sy hijerena ny fiasan'izy ireny.
Mitohy ny famolavolana endrika ato amin'ny GV
Taorian'ny fanomezana tefiendrika vao tsy ela akory natao tamin'ireo tranonkala GV, tsy nihevitra ny hihemotra ny Vondron'asa Mpanao Tefiendriky ny GV (ahitàna ireo mpikambana avy ao anatin'ny ekipa mpitantana sy ireo mpitarika ny famoahana lahatsoratra). Ho avy hatrany ireo fiovàna vaovao satria isika miezaka ny haha-maoderina ny tranonkala, amin'ny fijerin'ny maso sy amin'ny zavatra aseho ary ny fahafahana miditra aminy.
Manantena izahay fa hiara-dalana aminay ao anatin'io hazakazaka io ianareo ary hampahafantatra anay izay hevitrareo! Manomboka izao izahay dia manandrana ireo dingana lehibe vaovao amin'ny famoronana traikefam-pamakiana madio, mora ary mahafinaritra miaraka amin'ireo tantarantsika.
Karazana “Skinny Post” , ahoana ny hevitrareo?
Ny fiovàna manokana noheverinay dia ny fanesorana ilay tsanganana (sidebar) tsy ho ao anatin'ireo lahatsoratra amin'ny fitaovana rehetra intsony, hatrany amin'ny solosaina izay manana fàfana midadasika. Io traikefam-pamakiana “tsy misy-tsanganana” io dia efa fenitra nataontsika ho an'ireo tablety, ny finday, ary irey fitety rehetra kely loatra tsy afaka asiana tsanganana, saingy maro amintsika no mahatsapa fa mety sy tsara kokoa raha tsy misy ilay tsanganana na dia misy toerana malalaka aza. Araka izany, nandramanay ny tefiendrika iray manafina ilay tsanganana, tsy ijerena izay haben'ny fàfana, amin'ny fametrahana ho eo anivo ny lahatsoratra, na toy inona na toy inona haben'ny habaka azo ampiasaina.
Toy izao izy rehefa ampitahaina amin'ilay tefiendrika teo alohany:
POTSIRO RAHA HANALEHIBE. Fampitahana ireo dika roa, “lahatsoratra andavanandro” sy “lahatsoratra manify”. Tsarovy fa amin'ny tablety sy finday, hitovy amin'ilay iray eo amin'ny havanana daholo izy ireo, fa fotsiny somary kely ilay faritra fotsy tavela amin'ny andaniny roa.
Araka ny hitanareo, ny lafy ratsy goavana indrindra dia very ireo “Tantara Malaza Erantany” teo akaikin'ny lahatsoratra, hatramin'ilay habaka fanampiny tery ambony izay nipetrahan'ny sarin'ny mpanoratra sy ireo rakitra hafa, ary voatosika midina koa ilay tantara.
Etsy ankilany, betsaka ny tombony, satria marobe ny olona no hanaiky fa toa hadio kokoa ilay izy ary ho mora kokoa ny mamaky ireo tena tantara, lavitry ny fanelingelenana aterak'ilay tsanganana (sidebar).
Te-hanandrana azy io amin'ny tena fitety ve? Apetaho fotsiny ny hoe ?gv_css_variant=post_skinny_centered ery amin'ny faran'ireo rohy misy ny tantara GV dia ho hitanareo ny dika amin'ny endrika lahatsoratra manify. Ito ny rohy iray ho an'ny lahatsoratra ao anatin'ny pikantsary amin'ny endriny “lahatsoratra manify”.
Ahoana no hevitrareo? Valio ao anaty fanehoankevitra raha manana fanehoam-pijery matanjaka ianareo!
Andrana A/B ary ireo karazana tefiendrika
Ny hoe andrana “A/B” dia midika fanolorana dika roa tsy mitovy amin'ny tranonkalantsika, raisina tsy an-kifidy (ny dika “A” sy ny dika “B” ) mba hanangonana rakitra sy hampitahàna azy roa. Hampiasa bebe kokoa andrana A /B ny GV mba hanombanana ireo hevitra famolavolàna tefiendrika vaovao sy hiantohana fa manampy amin'ny seraserantsika izy ireny, na farafahakeliny tsy hanohintohina azy.
Amin'izao fotoana izao dia andramantsika ny andrana A/B amin'ny karazana “Skinny Post” voafaritra etsy ambony, araka izany dia miankina amin'ny fizotry ny antsapaka eo, rehefa mitsidika tantara GV iray ianareo dia mety hivoaka tsy misy ‘sidebar’ ilay izy.
Amin'izay fotoana izay, hojerenay ny antontanisan'ny Google Analytics hijerena raha toa ny olona ka mamaky elaela kokoa miaraka amin'ilay dika vaovao, hatramin'ny hoe mba mikitika sa tsia ireo tantara mifandraika amin'iny ve ry zareo. Rehefa ananantsika ny torohay misimisy koka, ho azontsika atao ny manapaka hevitra na hotohizana na tsia ilay dika vaovao, sy izay fanatsaràna tokony hifantohana mba hisorohana ny mety ho vokadratsy rehetra.
Araka izany, raha mahita zavatra somary hafahafa ianareo, ary mahatsapa hoe somary kianjoanjo ilay izy, dia aza matahotra, tokony ho izay izy aloha!
Misaotra namaky ary ampahafantaro anay izay hevitrareo ?